Izahay dia manatsara ny vokatray hamaly ny filan'ny tsena.
Makefood amin'ny faharetana
Ny fitazonana rojom-pamokarana maharitra ho antsika no laharam-pahamehana amin'ny fahombiazan'ny asa aman-draharaha sy ny indostria iray manontolo.
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpivarotra hazan-dranomasina an'izao tontolo izao dia manana fiheverana manokana izahay amin'ny fahasalamana lavitry ny Ranomasintsika. Hazan-dranomasina marobe dia tratran'ny hazandrano izay mety hitarika amin'ny fanjonoana tafahoatra, hazandrano tsy ilaina ary fanararaotana manimba. Amin'ny alàlan'ny hetsika ataontsika dia mila mahazo antoka isika fa miaro ny toeram-ponenana an-dranomasina sy ireo vondrom-piarahamonina miankina amin'ny fanangonam-bokatra ho an'ny taranaka ho avy.
Ny fanoloran-tenantsika amin'ny faharetan'ny hazan-dranomasina dia maharitra satria hitantsika fa tsy misy fanamboarana haingana. Manohana ireo jono izay manana fanjonoana maharitra sy maharitra amin'ny fon'ny zavatra rehetra ataon'izy ireo izahay.
Izahay dia mihevitra fa mila miasa ao anatin'ny indostria izahay hitari-dàlana sy hitaona, hampitrosaka ny mpanjifantsika sy ny mpamatsy antsika amin'ny fomba maharitra maharitra hisamborana sy hamokarana.
Manohana ny asan'ny fikambanana tsy miankina maromaro toa ny MSC (Marine Stewardship Council) sy ny Alaska RFM (Responsible Fisheries Management) izay nametraka fenitra indostrialy avo lenta mba hiantohana ny fiatraikany ara-tontolo iainana kely amin'ny Fanjonoana manerantany.
Ny fitsipinay dia milaza fa:
Mitadiava fankatoavana mahaleo tena an'ny antoko fahatelo raha mety ary omeo safidy ireo mpamatsy izay ekena.
Mangataka izahay mba hahalala ny loharano sy ny niavian'ny vokatra amidinay ary ezahinay ny hanafohezana ny rojom-panomezana raha ilaina.
Izahay dia tsy mivarotra vokatra manimba ny tontolo iainana na mampidi-doza ny fahaveloman'ny karazan-javaboary mihitsy nefa tsy mikasa ny hanitsy ny mari-pahaizana maharitra momba ny vokatra.
Manentana ny mpanjifantsika sy mpamatsy izahay hanao safidy maharitra kokoa.
Nahomby ny fandefasana ireo fonosana vaovao azonay vita amin'ny compostable ho an'ireo vokatra azo avy amin'ny hazandranomasina mivaingana tamin'ny taona 2020. Ny faniriana hanao fiatraikany sy hamorona hetsika dia nitarika ny fivoaran'ny Makefood ho fampiasana fonosana azo zezika. Amin'ny fanaovana izany dia antenainay ny hahatonga ny mpanjifa, hieritreritra tsara ny fiantraikan'ny fonosana plastika tsy azo ampiasaina intsony amin'ny tontolo iainana; ary miaraka isika dia afaka manentana ny famokarana be loatra. Ny tanjontsika dia tsy ny hitazomana ny toerana an-drenivohitra ho madio fa ny tena zava-dehibe dia ny ranomasina, izay niavian'ny vokatra. Ho setrin'izany, mampihena ny antony ratsy mifandraika amin'ny indostrian'ny hazan-dranomasina.
Tao amin'ny Makefood dia nanao ny dingana voalohany izahay, ary miaraka, manana ny fahafaha-mamorona ho avy tsaratsara kokoa sy madio kokoa izahay. Fandraisana andraikitra maharitra amin'ny alàlan'ny fanavaozana.
Tsy mino izahay fa hijanona io fomba io. Tsy hisy haharitra mandrakizay. Hitanay izany fa dia lavitra fa tsy toerana haleha.
Vokatra mafana, Sitemap, Sina Frozen Tilapia GS, Tapaka ny volan'ny Tilapia be sandry, China Tilapia Beky, Tilapia GGS, Sina Tilapia GS, ASC tilapia fillet,